Ciidamada Dowladda oo jirdil ugeystay Qaar kamid Warfidiyeeno ku sugnaa Degmada Kaxda. – XAMAR POST
Ciidamada Dowladda oo jirdil ugeystay Qaar kamid Warfidiyeeno ku sugnaa Degmada Kaxda.
Ciidamada ka tirsan Haramcad ayaa jirdil ugeystay wariyaal ka tirsan Talefishinada Madaxa Banaan Islamarkaana Doonaanyay iney Warar kasoo Tabiyaan Saldhiga Degmada kaxda oo xalay Halkaasi Alshabaab Weeraar ku Qaadeen.
Wariyaasha ayaa la qabtay xili ay ku guda jireen hawlahooda shaqo waxaana Sawirro baraha bulshada lagu baahiyay ay mujinayee iyadoo boga lo dhigay dhulka oo shaararkii ay wateen laga siibay.
Ururka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS oo ka hadlay dhacdadaani ayaa ku tilmaamay in ay tahay mid ka baxsan bini’aadanimadda.
” SJS waxay si adag u cambaareyneysaa weerarka, gacan-qaadka iyo falka ka baxsan bani’aadannimada ee bahdilka iyo cabsigelinta ku dheehan tahay ee ay ciidanka booliska #Haramacad saaka u geysteen afar suxufi oo ka kala tirsan telefishannada madaxa-bannaan.
Afarta suxufi oo kala ah: Ismaaciil Maxamed Muuse iyo Maxamed Xasan oo ka tirsan Somali Cable TV iyo Aweys Maxamuud iyo Maxamed Baarri oo ka tirsan Five Somali TV ayaa ku guda jiray tebinta wararka la xiriira weerar xalay ka dhacay degmada #Kaxda ee magaalada Muqdisho.
Waxaan ugu baaqeynaa masu’uuliyiinta ammaanka #Muqdisho iny deg deg ku sii daayaan suxufiyiintan. Waana in lala xisaabtamaa saraakiisha booliska Haramcad ee weerarkan ka baxsan bani’aadammida geystay,, ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay SJS.
WHO oo markale ka digtay xanuunka Covid-19.
Maamulka gobalka Banaadir oo Safaaradda UK kala hadlay Abaaraha dalka ka jira